Tag: soo kabasho | Martech Zone
Waa Maxay Qiimaynta Sideed Ku Hormarin Kartaa Heerkaaga Soo Kordhin?
Arbacada, December 9, 2020 Arbacada, December 9, 2020 Douglas Karr
Heerka soo-kabashada waa mid ka mid ah kuwa KPI-yada ee suuqleyda dijitaalka ahi ay waqti badan ku bixiyaan falanqaynta iyo isku dayga inay horumariyaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan si buuxda u fahmin waxa soo kicintu tahay, waxaa laga yaabaa inaad khalad ku sameyso sida aad isugu deyeyso inaad u horumariso. Waxaan ku dhex mari doonaa qeexida sicirka boodboodka, xoogaa yar, iyo siyaabo aad ku horumarin kartid heerkaaga soo kabashada. Qeexida Heerka Qiyaasta Bounce-ka ayaa ah fadhi hal bog ah oo ka socda boggaaga. Gudaha
Google Analytics: Ha Qorin Subdomain Guji sida Bounce
Jimco, Juun 13, 2014 Jimco, Juun 13, 2014 Douglas Karr
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheennu waa Software-ka adeegga Bixiyeyaasha waxayna leeyihiin degel iyo degel codsi. Waxaan kugula talineynaa in labadaba inta badan lakala saaro maadaama aad rabto fududeeynta iyo dabacsanaanta nidaamka maareynta maareynta ee bartaada, laakiin ma rabto inaad xakameyso xakameynta nooca, amniga iyo arrimaha kale ee ku saabsan dalabkaaga. Si kastaba ha noqotee, taasi waxay keenaysaa caqabado marka ay timaado Google Analytics markaad socoto laba koonto oo kala duwan -
Video: Mawduuc ka soo horjeedka Backlinks
Axad, Oktoobar 26, 2008 Jimco, Oktoobar 17, 2014 Douglas Karr
Dad badan ayaa qarash gareeya oo waqtigooda ku iibiya wax ka qabashada websaydhkooda, waxayna dabaysha u xoqdaan madaxooda markay bog kale ka darajo sarreeyo laakiin aan la hagaajin. Sababtoo ah hagaajinta mawduucu waa dagaalka badhkiis, waxay helaysaa dareenka bogagga kale ee runtii ku riixaya boggaaga Natiijooyinka Raadinta. Shaqada mashiinka raadinta ayaa ah inay bixiso natiijooyin la xiriira. Haddii goobo badan oo kale oo aad loo ixtiraamo ay kuu tilmaamaan
Waa maalintii labaad ee Mozilla Firefox 3 waxaanan horeyba Safari uga saaray xeradayda. Browser-ku aad buu u dhakhso badan yahay (Waxaan qiyaasayaa ilaa inta ku-darsaneysa ee caanka ah iyo xoogaa casriyeyn ammaan ah ay yimaadaan). Waxaan aaminsanahay inay mudan tahay casriyaynta oo aan sugi karo dhawr maalmood ilaa ay ku sii kordhayaan xawaare. Hagaajinta Isticmaalka ee Khariidadda Button Isbedelka ugu muuqda ee muuqda marka aad bilowdo FF3 waa badhanka weyn ee dhabarka ee